Ra’iisul wasaaraha oo kulan gaar ah la yeeshay guddiga gurmadka abaaraha (SAWIRO+DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaaraha oo kulan gaar ah la yeeshay guddiga gurmadka abaaraha (SAWIRO+DHAGEYSO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay guddiga gurmadka abaaraha dalka, waxayna si gaar ah uga wada hadleen wax u qabashada dadka Soomaaliyeed ee saameynta ballaaran ay abaarahaasi ku yeesheen dalka.
Kulankaan oo ay guddida gurmadka abaaraha ugu warbixiyeen ra’iisul wasaaraha waxay soo bandhigeen in xaaladu tahay mid ku adag dadka xoolo dhaqatada ah iyo duunyadaba, iyagoo hogo tusaaleeyey soona bandhigay inay jiraan dad ay isugu darsameen abaaro iyo shuban biyood.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaaa ballan ku qaaday inaanay ka xukuumad ahaan waxba kala hari doonin dadkaasi abaartu haleeshay, haday noqoto gargaarka biyaha, saadka dadka iyo xoolaha wixii awoodooda ah, guddiguna ay dadaalkooda sii kordhin doonaan mar walbana uu ku dabajoogi doono sida ay wax u socdaan si dadka iyo duunyadaba loo badbaadiyo ilaahay ayaa wax badbaadin karee.
“Dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxa maanta looga fadhiyaa inay badbaadiyaan walaalahooda dibaateysan oo haddii aan wax lala gaarin gaajo u dhiman doona; waxay noqon doontaa howsha xukuumaddu maalmaha soo socda mid ku wajahan abaaraha oo kaliya” Sidaas waxaa yiri ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa tilmaamay in 48dii saac ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen qaar kamid ah gobolada Koonfureed gaar ahaan gobolka Bay dad tiradoodu gaareyso 110 ruux oo saameeyeen abaaraha iyo cudurka shuban biyood halkaasi ka dilaacay, isagoona xusay in xilligaan loo baahan yahay iskaashi buuxa iyo wada shaqeyn dhex marta shacabka iyo dawladda si wadajir loogu gurmado dadka Soomaaliyeed ee dhiban.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo cid walba oo dhaqaale haysta in gurmadka qeybtooda ay ka qaataan, islamarkaana ay badbaadiyaan dadka u dhimanaya gaajada iyo haraadka, isagoo dhinaca kale tilmaamay in wadajir loogu duceeyo dadka iyo dalka Soomaaliyeed in ALLE uu ka qaado colaada iyo abaaraha soo noq-noqday.